Group Of Metro အိန္ဒိယတွင်သစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြားများထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ
လာမည့်နှစ်များတွင်အိမ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံကိန်းကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်အတူပိုမိုအဆင်ပြေသည်Metro Group's ရွေးချယ်ခြင်းရွေးချယ်စရာများ. သစ်သားကြမ်းခင်းကိုတပ်ဆင်ပြီးကြမ်းခင်းထူးချွန်မှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ရပြီးသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်း. သစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြားများသည်ကော်ပိုရိတ်အတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းအတွင်းရှိအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည့်နေ့များဖြစ်သည်. သစ်သားကြည့်ရှုသည့်အခမ်းအနားသည်တောင့်တသောသို့မဟုတ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးပုံစံကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအတွက်လေးစားဖွယ်ကောင်းသည်. ဤအရာများသည်အဝတ်လျှော်ခန်းများနှင့်ရေခဲသေတ္တာများရှိသည့်နေရာများသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းကြမ်းခင်းများအသုံးပြုမှုကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ရေချိုးခန်းများသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းနေရာများတွင်ကဲ့သို့အစိုဓာတ်ပြုခြင်းနေရာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
Metro group အထူးသဖြင့်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုရှိသောဒေသများအတွက်အထူးသဖြင့်နယ်မြေများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ရေချိုးခန်းသစ်သားအုပ်စိမ်းပြားများသီးသန့်စုဆောင်းမှုရှိသည်. သစ်သားကြမ်းခင်းများရွေးချယ်စရာများအနက်, ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်သစ်သားလှိုင်းတံပိုးများ, သစ်သားအုတ်မြစ်များ,. သစ်သားအုပ်စိုးရန်0ယ်လိုအားမှာနေ့တစ်နေ့တွင်0ယ်လိုအားရှိခဲ့ပြီးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, သစ်သားများ, အမျိုးမျိုးသောသစ်သားများ,.သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်သစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြားများကိုလက်ျာကြမ်းပြင်ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန်လမ်းကြောင်းများပေးရန်, Metro Group ခေတ်မှီနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူထိပ်တန်းသစ်သားကြွေပြားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်.သင်၏အာကာသ၏အပြင်နှင့်အသွင်အပြင်ကိုခေတ်ရာများကိုခေတ်မီစေရန်အတွက်သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ဆန်းသစ်စွာအလုပ်လုပ်သည်.
200 x 1000 မီလီမီတာ MM သစ်သားကြမ်းခင်း
150 x 900 မီလီမီတာ MM သစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြား
200 x 1400 မီလီမီတာ MM သစ်သားကြမ်းခင်း
သစ်သားလှည့်ကွက်များသည်ဖောက်သည်များနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာများအတွက် tiles ည့်သည်များနှင့်သစ်သားဒီဇိုင်းများကိုအလွန်ခိုင်ခံ့သောသစ်သားကြည့်ရှုသည့်သစ်သားနှင့်သစ်သားကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်သားကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိသစ်သားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်ကို အသုံးပြု. အဆင့်မြင့်သော tile design technology ကို အသုံးပြု. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အတိုင်းပြုလုပ်သည်။. Metro Group ကြွေထည်နှင့်ကြွေထည်ကဲ့သို့ကြာရှည်ခံသကဲ့သို့ကြာရှည်ခံနိုင်သည့်တောအုပ်သို့မဟုတ်သစ်သားကြည့်ရှုသည့်သစ်သားများကြည့်ရှုပါ. သစ်သားကြမ်းခင်းကိုသုံးပြီးကြမ်းခင်းသို့မဟုတ်ကြွေပြားများကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အာကာသသို့မဟုတ် area ရိယာကိုခြစ်ရာများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးထင်းကဲ့သို့တူညီသောနှင့်လက်ရာမြောက်မြားစွာကိုကြည့်ရှုလိမ့်မည်.
Metro Group's သစ်သားကြည့်ရှုသည့် tile ကို textured စတိုင်တွင်ကျော်ကြားသည်။. ဗေဒင်တွက်ခြင်းအပြင်သစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြားများကလည်းထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တာရှည်ခံရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်. သစ်သားဘောပင်များ, ကွင်းများနှင့်ကြီးမားသောခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်ကြီးမားသောခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသစ်သားဘောပင်များနှင့်ပြည့်စုံသောသစ်သားအုပ်စုပ်စက်များရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်သည်သစ်သားအုပ်စိုးမှုအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသစ်သားအုပ်စိုးမှုများကိုသဘာဝထင်းနှင့်နီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်သေချာစေခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးနှင့်လက်တွေ့ကျသောအသွင်အပြင်ကိုလက်တွေ့ကျကျကြည့်ရှုရန်ရည်ရွယ်ထားသည်,.
တောင်းဆိုထားသောသစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြားများသည်အမှောင်ထုများ, Knotty သစ်သားကြမ်းခင်းကြွေပြားများ,.
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ဦး စားပေးအပေါ်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, Metro Group ဖန်တီးမှုနှင့်ခေတ်မှီဖောက်သည်များအတွက်အဖြူရောင်ပန်းချီကားများ, မီးခိုးရောင်နှင့်ရောင်စုံသက်ရောက်မှုများဖြင့်မျိုးပွားများဖြင့်သစ်သားအုပ်စိုးမှုရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသူတို့အားပံ့ပိုး ပေး. Creative Vision ကိုအမှန်တကယ်အဖြစ်မှန်သို့ရောက်စေရန်ကြီးမားသောပုံစံနှင့်အကျယ်ကျယ်ပြန့်သောအဖုံးများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအကျယ်အ0န်းကိုပိုမိုကြီးမားစွာပေးနိုင်သည်.
ကျနော်တို့က ဦး ဆောင်သစ်သားကြွေထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်သားကြမ်းပြင်ကိုအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားသောကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားသော.